Ubuntu Server 20.04 inogona kuuya neyakagadziridzwa mugadziri | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe iine kumwe kushandiswa zvakare, vashandisi vazhinji vanoisa Ubuntu Server kushandisa vhezheni yeUbuntu isina zvachose bloatware. Zvakawanda zvekuti, kuti ukwanise kuishandisa sedesktop inoshanda sisitimu, chinhu chekutanga chavanopa zano ndechekuisa graphical nharaunda. Iyo zvakare yakanaka sarudzo yekushandisa pane akareruka mabhodhi seiyo Raspberry Pi. Asi iyo yekudzikira ndiyo inosimudza, zvakati nyonganisa nhasi. Ichi chinhu chavari kuronga kuchinjira Ubuntu Server 20.04.
Aya ndiwo maitiro avanga vachiita nharo nazvo kweinenge vhiki mu Canonical maforamu. Imwe yemapoinzi ivo yavanoda kusimudzira ndeyekuti kumisikidzwa kweUbuntu Server 20.04 kunokurumidza kupfuura mune zvekare shanduro. Kune rimwe divi, ivo vanodawo kuti ive yakasununguka, yeiyo bvisa iyo Debian-based installer kuti itsive neyayo uye zvemazuva ano.
Ubuntu Server 20.04 yekumisikidza haichazovakwa paDebian
Iine 20.04 LTS, isu tichapedzisa iyo shanduko kune inorarama sevha inosimudza uye kumisa iyo yechinyakare debian-simaki (di) -based server simaki, ichitibvumidza isu kutarisa edu enjiniya kuyedza pane imwechete kodhi base. Inotevera-chizvarwa subiquity inorarama server inopa iri nyore mhenyu musangano uye nekukurumidza kumisikidza Ubuntu Desktop kune vashandisi ve server.
Iyo nyowani vhezheni yeiyo inosimbisa inosanganisira kuvandudza senge:
SSH ichave inogoneswa muchikamu chekumisikidza.
Nyowani Yakatungamirwa Yakakwenenzverwa Kuisa Sarudzo.
Tsigiro ye vtoc (Vhoriyamu Tafura yezviri Mukati) matafura ekuparadzanisa anoshandiswa neDhijitari Yekuchengetedza Zvishandiso (DASD) pane iyo s390x (IBM System z) kuvaka.
Tsigiro yeRAIR neLVM, kusanganisira rutsigiro rwearm64, ppc64el, uye s390x zvivakwa.
Yakabatanidzwa bug bug.
Tsigiro yekumisikidza VLAN uye netiweki zvinongedzo, pamwe nekuchinjira kune Shell yezvinangwa zvekugadzirisa.
Canonical irikutikoka kuyedza iyo nyowani nyowani, yatinofanira kurodha pasi Mazuva ese Kuvaka Ubuntu Server 20.04, inowanikwa kubva Iyi link. Pasina kupokana uye sezvatataura, iyi nhau inonakidza kune vashandisi vemahwendefa akareruka senge Raspberry Pi, uye zvimwe mushure mekudzidza kuti Canonical ichavandudza rutsigiro rweRaspberry mahwendefa mukuburitswa mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Server 20.04 inogona kusvika ine yekuvandudza uye nekukurumidza mugadziri
VM E2, iyo mhuri nyowani yemamishini chaiwo kubva kuGoogle